कारोबार Archives - Khula Patra
वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिफल क्षमता ४८ प्रतिशतले कमी, कुन बैंकको प्रतिफल कति?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले सेयरमा गरेको लगानीको प्रतिफल (आरओइ) रकम ४७.९६ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकहद्वारा प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तिय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आरओइ १३.५३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम...
पाँच करोडको कारोबार गर्दै सकियो भक्तपुर पर्यटन महोत्सव
भक्तपुर । ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै भक्तपुरमा जारी सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार मेलामा सम्पन्न भएको छ । महोत्सबमा करिब ४ लाख आगन्तुकहरू भ्रमण गरेको र ५ करोड बराबरको कारोबार भएको आयोजक औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सन्दिप महतले बताए । मेलाका संयोजक दीपक थापाका अनुसार मेलाम...
तंग्रिँदै पदयात्रा पर्यटन, व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको पदयात्रा पर्यटनले गति लिन थालेसँगै यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। पछिल्ला दिनमा पदयात्रा पर्यटनमा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित बन्दै गएका अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रा होस वा मर्दी हिमालको पदयात्राका लागि दैनिक ठूलै सङ्ख्यामा पदयात...
उद्योग मन्त्री बडूलाई चेम्बरको १९ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरले कृषिको प्रर्वद्धन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सिपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान...
अर्थतन्त्र सुध्रिँदो रहेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी, यस्ता छन् चालु आ.व.का आर्थिक सूचकहरु
काठमाडाैँ । सरकारले पछिल्लो दुई वर्षदेखिको कोरोना कहरका कारण प्रतिकूल प्रभावमा परेर शिथिल भएको अर्थतन्त्र सामान्यीकरण बन्दै गएको स्पष्ट पारेको छ । कोभिड १९ महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्य पेश गर्दै सरकारले २०७६ साल फागुनको तुलनामा २०७८ कार्तिक महिनासम्म करिब...
काठमाडौं । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् । संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने...
अर्थमन्त्री शर्माले भने- ‘देश श्रीलंका हुन्छ भन्नु राष्ट्रघात हो, अहिले पनि ट्रेजरीमा ६७ अर्ब छ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश श्रीलंका हुन्छ भनेर अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु अनावश्यक भएको बताएका छन् । देश श्रीलंका हुन्छ भन्नु राष्ट्रघात भएको उनको भनाइ छ । ‘अफवाहहरूलाई जोड्दै जोड्दै लिएर कहाँ लग्न खोजिदैंछ भने देश श्रीलंका हुन्छ भन्नेतिर लग्न खोजिदैंछ । यो राष्ट्र...
मालपोत कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख ५ लाख घुससहित पक्राउ
जनकपुर । मालपोत कार्यालय जनकपुरका निमित्त प्रमुख सुनिल झा घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले झालाई सोमबार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। अख्तियारका अनुसार झाले जग्गासम्बन्धी काम मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप छ। सोमब...
अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीको १२ बुँदे धारणा [पूर्णपाठसहित]
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे १२ बुँदे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। हेर्नुहोस् उनीहरूको धारणा जस्ताको तस्तै-- १. नेकपा (एमाले) को सरकारले छोडेको अर्थतन्त्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वम...
विलासी वस्तुको एलसी एक हप्ता बन्द गर्ने बैंकर्स संघको निर्णय
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले एक हप्तासम्म विलासी वस्तुहरुको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको संघको बैठकले आगामी वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने र एक हप्तालाई अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरे...
फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य : पेट्रोल १६० रुपैयाँ, डिजेल १४३
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। गएराति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले मूल्य वृद्धि गरेको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढाएको छ। अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको मू...
राससका फोटो पत्रकार श्रेष्ठको विस्का जात्रासम्बन्धी एकल फोटो प्रदर्शनी शुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठको मध्यपुर ठिमीमा हुने बिस्केट (बिस्का) जात्रासम्बन्धी एकल फोटो प्रदर्शनी आजदेखि शुरु भएको छ । पर्यटन बोर्डको प्राङ्गणमा भएको उक्त प्रदर्शनी तीन दिनसम्म चल्नेछ । मध्यपुर ठिमीमा हुँदै आएको जात्राका १०० बढी फोटो प्रदर्शनीम...
अर्थतन्त्र सुधार्ने गगनको सूत्र- आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुलक उद्योगलाई संरक्षण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताएका छन्। फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले सोमबार महामन्त्री थापालाई नीतिगत सुधार गनुप...
‘आरआरआर’का क्रान्तिकारी पात्र भीम र राजू, जसलाई आदिवासीले भगवान् मान्छन्
गत साता विश्वव्यापी रिलिज भएको दक्षिण भारतीय फिल्म आरआरआरले धुम मच्चाइरहेको छ। व्यापार र विश्लेषण दुवैमा फिल्मले कमाल गरेको छ। फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहँदा मुख्य पात्र कुमारम भीम र अल्लुरी सीताराम राजुको चर्चा पनि बढ्दो छ। चलचित्रले बजार तताएपछि दर्शकको मनमा यी दुई पात्रको बारेमा जान्न...
व्यवसायीले ढुवानी रोकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव
काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायीले शुक्रबारदेखि ढुवानी रोकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ। शनिबार कतिपय पेट्रोल पम्प बन्द रहेका छन् भने खुलेका पम्पमा लामो लाइन लागेको छ। शनिबार पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी भएका केही निजी र नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र साझाले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरे...
काठमाडौं । मोरङ व्यापार संघले नेपाल सरकारसँग सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा विद्युत्‌को नियमित आपूर्तिका लागि मंगलबार आग्रह गरेको छ। मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रदेश १ द्वारा ‘वर्तमान विद्युत् सङ्कटका’ सम्बन्धमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ...
यी हुन् पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने टप १० मुलुक
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्गत मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल, हवाईइन्धन वा अन्य प्रशोधित पदार्थ पर्दछन् । विश्वका केही देशले पेट्रोललाई आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिएका छन् र ती देश धनी पनि भएका छन् । आजको हाम्रो रिपोर्ट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने टप १० देशहरुको हो । दशौं नम्बरमा परेको...
बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको संकट, घरजग्गाको कारोबार भने बढ्याे
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायमै भए पनि घरजग्गाको कारोबारमा भने कुनै प्रभाव नपरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घर जग्गाको कारोबारमा कडाइ गरे पनि अवस्था त्यस्तो पाइएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार ...
सेवाग्राहिको काममा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री हाङ्गामको निर्देशन
विराटनगर । उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकास हाङ्गामले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्रालय माताहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहिबार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङको निरीक्षणका क्रममा उहाँले सेवाग्राहिलाई कतिपनि ढिला नहुने गरि उनिहरुको का...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएको जनाउँदै निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो । पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढाइएको छ । त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढेको छ । बढेको मूल्य...
नबिल–एनबी मर्जर अघि बढ्यो, हिमालयन बैंकले को खोज्दै छ पार्टनर ?
काठमाडौं । नबिल बैंक र एनबी (नेपाल बंगलादेश) बैंक लिमिटेडको मर्जरको प्रक्रिया अघि बढेको छ। नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्राप्त भएको छ। नबिल बैंकलाई आगामी ६ महिनाभित्र मर्जरका सबै प्रक्रिया सकी एकीकृत कारोब...
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो, नेपालमा के हुन्छ?
काठमाडौं । रूस-युक्रेन संकटको प्रभाव विश्व बजारमा देखिन थालेको छ। बिहीबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको हो। पुटिनको घोषणा लगत्तै बढ्दो तनावका बीच कच्चा तेलको प्रति ब्यारेल मूल्य सय अमेरिकी डलर पुगेको...
तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा ढुंगाना सर्वसम्मत
तेह्रथुम । तेह्रथुम । तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा राजिव ढुङ्गाना चयन भएका छन् । म्याङ्लुङमा शनिबार सम्पन्न संघको ११ औँ अधिवेशनले ढुंगानाको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तारावीर श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्षमा राजन खत्री, द्वि...
काठमाडौँ । जनताको सेवाका लागि जनताबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले घुस माग्छन् भन्ने सामान्य मानिसले सोच्न पनि सक्दैनन् । तर सर्लाहीमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वडा सदस्यलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । आयोगका अनुसार रु एक लाख ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा ईश्वरपुर नगरपालिका ११...
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हिउँद सिनका लागि लक्षित गरेर अटम अफर ल्याएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी टेलिकमले ३ महिनाका लागि यो अफर ल्याएको हो । यो अफर अन्तर्गत टेलिकमले सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ५९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ७९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड ९९९ अफर, सजिलो अनलिमिटेड पोस्ट...
म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको काम ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारकोे संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो।...
भक्तपुर । भक्तपुरको सिपाडोलमा १४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ८ मा पर्ने सो क्षेत्रमा शनिबारदेखि ‘उर्वरा रिसोर्ट’ सञ्चालनमा आएको हो । सुर्यविनायक नगरपालिका ८ सिपाडोल, डोलेश्वर मन्दिर नजिकै रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो । सञ्चालक सुमित्रा थापा सहि...
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारका लागि बोलाइएको बैठकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याएको बजेटमा पारित हुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त बजेट संशोधनका लागि कुनै पनि संशोधन प्रस्ता दर्ता नगरेपछि सोमबारको बैठकमा बजेट पारित हुने भएको हो। ...
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आज मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले एक समारोहवीच स्वागत सम्मान गरेका छन् । १८ भाद्रमा निर्वाचित सेजनमा जनार्दन बरालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । यसरी सम्मानित हुनेहरुमा अध्यक्ष बराल सहित उ...
रामधुनीमा सनराइजको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
रामधुनी । सनराइज बैंक लिमिटेडले सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-२, तित्रिवनमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । आइतबार आयोजित शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा समुद्घाटन कार्यक्रम सनराइज बैँक लिमीटेडका १ नम्बर प्रदेश प्रमुख विवेक कुमार निरौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । बैंकिङ्ग सेवाको माध्यमबाट...
निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, एलपी ग्यास १४ सय ५० पुग्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोल तथा डिजल/मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो । बढेको मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३० र डिजल/मट्टीतेलको ११३ रुपै...
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी, कानूनविपरीत जथाभावी खर्च
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा ‘गाँउगाँउमा सिंहदरबार’को नारा राम्रै गरी लागेको थियो। जनतालाई घर आँगनमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मत माग्न गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कतिपय स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा पनि दिएका छन्। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफ्नै सेवा सुविधामा ...
गोर्खा ब्रुअरीले झन्डै १ अर्ब कर छली गर्‍यो
काठमाडौं । टुबोर्ग, काल्सबर्ग र गोर्खा बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले झन्डै अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५८औं वार्षिक प्रतिेवदनमा गोर्खा ब्रुअरीले नियम विपरीत बढी जर्ती कटाएर ९२ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको उल्लेख गरेको हो। अन्तशु...
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै घरपरिवारलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहक ४५ लाख ३० हजार पुगेका छन्। अघिल्लो आवमा ४२ लाख २२ हजार रहेकामा आव २०७७/७८ मा ७.३७ प्रतिशतले ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। यस्तै, सामुदायिक संस्थातर...
ललितपुरको ग्वार्कोमा बन्दैछ नेपालकै पहिलो ‘फ्लाइओभर’, प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । सरकारको लगानीमा पहिलोपटक ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । काठमाडौँका बढी व्यस्त सडकमा हुने सवारी जाम कम गर्न सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ‘फ्लाइओभर’ वा ‘अण्डरपास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरेकामा पहिलोपटक ग्वार्कोमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको ...
५० रुपैयाँमा पाइने आधा लिटर दहीको गुणस्तर परीक्षण शुल्क ९ सय
काठमाडौं । बेलाबेलामा खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तु मिसाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि लापरबाही गरेको समाचार आइरहन्छन्। यसको मारमा ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता पर्ने गरेका छन्। उपभोग्य सामानमा शंका लागेमा परीक्षण गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यसैले कहिलेकाहीं खाद्यान्न गुणस्तरह...
नयाँ बजेट छिट्टै ल्याउँछु : अर्थमन्त्री शर्मा [यथार्थपत्रको पूर्णपाठ]
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको छिट्टै नयाँ बजेट ल्याइने जानकारी गराएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देशको आर्थिक अवस्थाको यथार्थपत्र प्रस्तुत गर्दै शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। 'अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, ...
सिरहा । लामो समयदेखि कर नबुझाएका ४० करदातामाथि आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानले कानूनी कारवाही अघि बढाएको छ। दर्ता भएर पनि कर नबुझाउने ४० करदातामाथि कानूनी कारवाहीस्वरूप कारोवार, बैंक खाता र चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए। रु पाँच लाखसम्म कर बक्यौता रा...
आर्थिक पत्रकारलाई उपयोगी ‘आर्थिक पत्रकारिता’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले ‘ आर्थिक पत्रकारिता– हाते किताब’ सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समाचार के हो ? र कसरी लेख्ने भन्नेबारेमा आर्थिक पत्रकारिता गर्न चाहने र गरिरहेका पत्रकारलाई उपयोगी हुने विश्वास गरिएको पुस्तक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ...
काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यही देशमा करोडौको तरकारी आयात हुन्छ भन्दा जो कोहीलाई पनि विश्वास नलाग्नसक्छ । तर त्यो सत्य हो । नेपालमा उत्पादन नहुने तरकारी आयात हुनु स्वभाविकै हो । तर नेपालमा उत्पादन हुने मात्रै होइन, नेपालमा उत्पादन भएर बजार नपाउने, यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले बजार पाएपन...
डीडीसीको घ्यू जापानदेखि अष्ट्रेलियासम्म निर्यात
हेटौंडा । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित दुग्ध विकास संस्थानको हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाद्वारा उत्पादित ६० हजार लिटर घ्यू यस वर्ष निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलियामा सो घ्यू निर्यात भएको आयोजना प्रमुख नरेश जोशीले जानकारी दिनुभएको छ । हेटौँडा औद्योगिक क...
रसुवा । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सवारी साधनको आयातमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा आयात सामग्रीको विवरण दिँदै रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चीनमा निर्मित सानाठूला ५६८ सवारी साधन नेपाल भित्रिएको र आयातको परिमाण भने क्रमशः वृद्धि भइरहेको जनाएको हो। कार्यालयका ...
काठमाडौं । सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय २० रुपैयाँ बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक ११ हजार पाँच सय ६१ रुपैयाँबाट बढाएर १२ हजार ८१ रुपैयाँ तोकेको हो । यो समाचार नेपालप्रेसमा प्रकाशित छ । ...
काभ्रेपलान्चोक । रोशी गाउँपालिकामा अवस्थित चर्चित तीनधारे झरना संरक्षण योजनाको लागि दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको छ । बहुवर्षीय योजनाका लागि गाउँपालिका र संरक्षणकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो । सम्झौताअनुसार तीनधारे संरक्षण योजनाअनुरुप झरना क्षेत्रमा खहरेपाँगुदेखि झरनासम्म जाने सडक स्तरोन्नति, प...
लगानी गर्न तयार हुनुहोस्, १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्नेगरि फेरि आउँदैछ नयाँ आईपीओ !
काठमाडौं । पछिल्लो समय पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी रहेको छ । लगानीकर्ता आकर्षित भईरहेको बेला फेरि नयाँ आईपीओ आउने भएको छ । मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको ७ करोड ३६ लाखा २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आउने भएको हो । कम्पनीले साउन १४ गतेदेखि एक सय अंकित दरको ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आई...
भक्तपुर । कोभिड–१९ को महामारीकाबीच आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपूरले अपनाएको प्रभावकारी कार्यशैलीका कारण लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा ६.७ प्रतिशत धेरै राजस्व असुली गरेको हो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४ अर्ब ४५ करोड ८२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर रकम अस...
राधेराधेमा समाज डेन्टलको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । समाज डेण्टल हस्पिटलको चौथो शाखा भक्तपुरको राधेराधेमा खुलेको छ । समाज डेन्टल हस्पिटलले आफ्नो स्थापनाको २१ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा भक्तपुरमा पनि सेवा विस्तार गरेको हो । समाज डेण्टल हस्पिटलका प्रमुख शंकु घिमिरिले सांस्कृतिक शहर भक्तपुर क्षेत्रमा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गर्न पाउदाँ खु...
देशभर साढे १० हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा, कुनको कति ?
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या साढे १० हजार भन्दा बढी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार देशभर १० हजार ६११ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शाखा रहेका छन् । गत वर्षको सोही अवधीसम्म देशभर ९ हजार ७६५ बैंक तथा वित्तिय शाखा रहेका...
काठमाडौं । पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्य घटेकाे छ । नेपाल आयल निगमले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी पेट्राेल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य १/१ रुपैयाँले घटाएकाे हाे । अब काठमाडौंमा पेट्राेलकाे मूल्य १ सय २९ रुपैयाँ र डिजेलकाे मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ कायम भएकाे छ । हाल पेट्राेलियम पदार्थमा मूल्य बढेकाे भन्दै...
असारे विकासले गति लिँदै, १० दिनमा ४६ अर्ब पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । सदाको वर्ष झै यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । असार २० गतेदेखि २९ गतेसम्मको १० दिनको अवधिमा ४५ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो १० दिनमा दैनिक ४ अर्ब ६० करोडका दरले खर्च भइरहेको महालेख नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । यस वर्षको अन्तिम साता २८ गतेलाई मात्रै हेर्ने ...
काठमाडौं महानगरले दियो ९० % सम्म कर छुट, कुन क्षेत्रमा कति ?
काठमाडौँ । करको दर यथावत् राखेर दायरा बढाउने नीति अनुरुप काठमाडौँ महानगरले नगर सभाबाट आर्थिक ऐन स्वीकृत गरेको छ । राजस्व विभागले आयोजना गरेको आर्थिक ऐन २०७८ मा भएका करका दर, छुटको व्यवस्था र अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा आयोजना गरिएको थियो । आ. व. ०७८-०७९ का लागि महानगरको न...
खोप खरिदका लागि ५ अर्बको सहमति
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्बको सहमति प्रदान गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदवहालीपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सो रकम दिनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । देउवा ...
हरेक महिना बिक्छन् १० हजार मोटरसाइकल
काठमाडौँ । गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हरेक महिना दश हजार नयाँ मोटरसाइकल दर्ता हुने गरेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता वृद्धिभएसँगै उक्त कार्यालयमा दर्ताको चाप वृद्धि भएको हो । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका करीब एक हजारको सङ्ख्यामा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनसमेत दर...
सूर्यविनायकमा विकास सम्भावनाको खोजी : शिव सर्किटदेखि साहसिक पर्यटनसम्म चर्चामा
भक्तपुर । मुलुककै राजधानीसँग जोडिएर पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् । बढ्दो जनसंख्यासँगै यी क्षेत्रहरु अव्यवस्थित शहरीकरणको शिकार बन्दै गर्दा उपत्यकासँग जोडिएको नगरपालिका हुनुको लाभ उठाएर आत्मनिर्भर स्थानीय तह कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे सूर्यविन...
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण: साढे ६ लाखले लिए तेस्रो किस्ता
काठमाडौं । महाभुकम्पपछि क्षति पुगेका निजी आवासमध्ये ६ लाख ६५ हजार २ सय ३३ घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही निक्र्योल भएकोमा ९५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकर...
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको पर्यटनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अब पर्यटन मन्त्रालयले कोभिड प्रोटोकल तयार पारेर उडान सुचारु हुने मिति र ढाँ...
जुनमा नेपाल भित्रिए ११ सय पर्यटक
काठमाडौँ । गत जुन महिनामा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय हुँदै जम्मा एक हजार १०० विदेशी नेपाल भित्रिएका छन् । दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गत वैशाख २३ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको जुन महिनाको तथ्य...
आगामी चुनावमा ७ अर्ब ७२ करोड खर्च गर्न निर्वाचन आयोगलाई सहमति
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई रु. ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखसम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामग्रीहरु खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च ...
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?
काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ खुला भएको छ । सो ३ लाख ६३ हजार ४ सय ९२ आईपीओ बिहीबारदेखि खुला भएको हो । त्यसबाहेक ६ हजार ५८ कित्ता कर्मचारी र १९ हजार ४ सय ५० कित्ता म्युचअल फण्डका लागि समेत आवेदन खुला भएको छ । यो आईपीओ असार २१ गते बन्द हुनेछ । यसका लागि न्यूनतम १० देखि अधिकतम १ हजार क...
खण्डहर बन्यो नेपालको एकमात्र कृषि औजार कारखाना
पर्सा । कुनै समय कृषि औजार उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने नेपालको एकमात्र कृषि औजार कारखाना खण्डहर बनेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले झण्डै दुई दशकअघि वीरगञ्जस्थित कारखाना बन्द गरेको थियो । यो कारखाना सन्चालन हुँदा नेपालमा उत्पादन भएका कृषिका केही औजारहरु भारतमा समेत निर्य...
सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई ८ प्रतिशत प्रतिफल
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने भएको छ। कोषले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सूचीकृत योगदानकर्तालाई वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सङ्कलित योगदान रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल योगदानकर्तालाई दिन लागेको हो। सो अवधिमा ३ करोड ८० लाख १५ हजार ६९८ रुपैयाँ ८० ...
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्यसुरुङ भने सुरक्षित
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीपहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कतिपय संरचनामा क्षति पु¥याए पनि मुख्य सुरुङ भने सुरक्षित रहेको छ । आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगे पनि मुख्य सुरुङ मार्ग भने सुरक्षित रहेको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार आयोजना स्थलसम्मको सम...
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कसरी लकडाउन सहज बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७ असारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ । अब ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला व्यवासायीहरुले सुझाव दिएका हु...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई सुदृढ पार्ने नभई कमजोर पार्ने देखिएको टिप्पणी गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा प्रदेशसभा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा कांग्रेस संसदीय दल वाग्मती प्रदेशले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर...
कर्णालीमा साढे ३६ अर्बको बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामसहित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोरोना रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्दै सातै प्रदेशले ल्याए बजेट (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । सात वटै प्रदेशले मंगलबार आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारहरुले मंगलबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन...
सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट (पूर्णपाठसहित)
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट भन्दा ३ अर्ब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरेका ह...
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ ।प्रतिशतका आ...
प्रदेश २ सरकारद्वारा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाखको बजेट घोषणा (पूर्णपाठसहित)
जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट घोषणा गरेको छ । चालूखर्च तर्फ १५ अर्ब ६३ कराेड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ कराेड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोेड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामि...
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख बजेट सार्वजनिक गरको छन् । जसमा चालुतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ रहेको छ भने पुँजीगत २१ अव १७ करोड रहेको छ । बजेटमा कोरोना महामारी तथा न...
गण्डकी सरकारले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट (पूर्णपाठसहित)
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८÷०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ क...
निषेधाज्ञामा होटेल खोल्नेलाई चार लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । निषेधाज्ञाको समयमा होटल खोलेको भन्दै प्रशासनले सञ्चालकलाई जरिवाना तिराएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा होटल खोलेको आरोपमा त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड विजनेश होटलका सञ्चालक अश्विल श्रेष्ठलाई ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार...
प्रदेश सांसदहरुले भने, ‘आङ्गछिरिङ्गको निम्ति रविन्द्रको नाम जोडियो’
काठमाडौँ । ताप्लेजुङ्ग सुकेटारको नाम परिवर्तन गरेर स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामाकरण गर्नु गलत मात्र नभएर स्थानीय पहिचानमै प्रहार भएको भन्दै प्रदेश सांसदहरुले बिरोध गरेका छन् । प्रदेश सभामा जारी बजेट अधिवेशनको शून्य समयमा हिजो बोल्दै सांसद बलबहादुर सामसुहाङ र प्रतापप्रकाश हाङगामले सरकार...
प्रदेश १, २, बाग्मती र सुदुरपश्चिम प्रदेशले पेश गर्दैछन् नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारहरुले विहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार बिहीबार प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार संसदमा पेस गर्ने भएका ह...
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै कार्ययाजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आबमा केही कार्यक्रम थप भएकाले भइरहेका र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्यवनका लागि समयमा नै लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले मनसुनले सडकमा पार्नसक्ने क...
सुनको तस्करी अन्त्य गर्न कोटा प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ: पूर्वमन्त्री विश्वकर्मा
चितवन । सुनको तस्करी अन्त्य गर्नका लागी सुनको कोटा प्रणाली बन्द गरिनुपर्ने पूर्वमन्त्री तथा सभासद् मिनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्। बुधबार विश्वकर्मा सुनचाँदी व्यवसायी सञ्जाल, केन्द्रीय समिति चितवनको आयोजनामा सञ्चालन भएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले सो कुरा बताएका ...
काठमाडौं । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गरी सामान बिक्री गर्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटको कोटेश्वर शाखालाई चार लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आदेश दिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले निषेधको आदेश उल्लंघन गरेर दिउँसो पसल खोल्ने भाटभटेनीको कोटेश्वर शाखालाई जरिवाना तिराउने आदेश दिएका हु...
रसुवा । स्थानीय बासिन्दा एवं पर्यटकको उपचार सेवा सहज पार्ने उद्देश्यले लाङ्टाङमा स्थापित स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापकीय कार्यमा सुधार आएको छ। सदरमुकाम धुञ्चेबाट दुई दिनको पैदल यात्रामा पुगिने पर्यटकीय क्षेत्रको हिमाली स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधिका साथै स्थानीयस्तरमै श्वासप्रश्वासको समस्या न्यून...
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फेरि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाएको छ। इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले मूल्य बढाएको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओएस)ले १ जुनमा पठाएको नयाँ मूल्य बढेर आएकाले निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य बढाएको हो। नयाँ मू...
निषेधाज्ञापछि नेपालमा रेल चल्छ: भौतिक पुर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निषेधाज्ञापछि नेपालमा रेल सेवा सन्चालन हुने बताएका छन् । जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले निषेधाज्ञापछि सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम पनि अब अगाडि बढ्ने उनले बताए। ...
क्वारेन्टिनका लागि पाँचतारेसहित ७८ होटल सूचिकरण
काठमाडौँ । सरकारले भारतलगायत तीन गन्तव्यको उडानबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि ७८ वटा होटललाई क्यारेन्टिन होटल बनाएको छ । पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ७८ वटा होटललाई क्यारेन्टिन होटलको रुपमा सूचिकरण गरिएको हो । पर्यटन विभागले आज पर्यटकदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका ७८ वटा होटलको नाम क्यारेन्टिन होटलको रुपमा...
किन आवद्ध हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा ? यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नचाहेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी आकर्षित योजना अघि सारेको छ। हरेक व्यापारिक फर्म, उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकारले जोड दिएको छ, जुन हालै घोषित बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा घोषणा गरिए अनुसार यो क...
डा.रामशरण महत वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजेट बैधानिक होइन । यस बारे हामी सबै जानकार हुन जरुरी छ । बजेट दुवै सदनमा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्को विषय बजेट निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संसदमा विश्वासको मत ...
प्रदेश एकले पायो सर्वाधिक बजेट
विराटनगर । मुुलुकका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको छ । संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै पाएको हो । दोस्रो बढी अनुदान लुम्बिनी, तेस्रो कर्णाली प्रदेशले पाएका छन् । चौथोमा सुदूरपश्चिम, पाँचौँम...
औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका २० हजार मजदुर बेरोजगार
विराटनगर । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जारी निषेध आदेशका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु १ महिनादेखि ठप्प छन्। दैनिक अर्बौँ मूल्यबराबरको उत्पादन गर्दै आएका करिडोर क्षेत्रका उद्योग अहिले सुनसान छन्। लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएपछि मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन्। निषेध आदेशक...
बजेटमा खास याेजना छैनन्, पूरानै निरन्तरता : अर्थविद्
काठमाडौँ । अर्थविद्ले आगामी वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले विगतकै योजनालाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले आइतबार आयोजना गरेको ‘बजेटले वर्तमान आर्थिक अवस्था र महामारीसँग लड्न सक्छ ?’ विषयको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा अर्थविद्ले बजेटले खासै नयाँ योजना नल्याएको बत...
सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले कति रकम पाए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा ७ प्रदेशमा १ खर्ब ३ अर्ब ७० करोड र ७५३ स्थानीय तहमा २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । वित्तीय सामान्यीकरण, समपूरक, सशर्त र...
कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट ? (विस्तृत विवरणसहित)
काठमाडौं । सरकारले संघीय सिञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने १५ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको विनियोजन अध्यादेश २०७८ मा ४८ शीर्षकमा सो बराबरको बजेट बिनियोजन गरिएको हो । ती शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय,...
सरकारले सुर्ती तथा चुरोटको अन्तःशुल्क बढायो, कसमा कति बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले सुर्ती तथा चुरोटमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशमा सुर्ती, चुरोट, बिडी, खैनी पान मसला तथा सबै सुर्तीजन्य वस्तुको अन्तःशुल्क बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक अध्यादेशमार्फत प्रति खिल्ली पचिस पैसादेखि किलोमा ४० ...
यस्ता छन् बजेटका मुख्य आकर्षण
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चालूगत, पुँँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ ...
भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट, कुन सडकलाई कति ?
काठमाडौँ । सरकारले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सडक, जलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल निर्माण तथा रेलसहितका आयोजानका लागि सो रकमको बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ...
कामचलाउ सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट [पुर्णपाठसहित]
काठमाडौं । चौतर्फी खबरदारीका बावजुद कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक प्रोपोगन्डा समेटिएका कार्यक्रमका साथ पूर्ण र नियमित बजेट ल्याएरै छाडेको छ। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति घोषणा गरेपछि पनि अध्यादेशमार्फत नियमित र पूर्ण बजेट ल्याउने गृहकार्यमा गरिरहँदा विभिन्न क्षेत्रका १९ पूर...
२० युनिटसम्मको विद्युत र २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल शतप्रतिशत छुट
काठमाडौँ । सरकारले निषेधाज्ञाघर विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई उपभोक्तालाई महसुलमा शतप्रतिशत छुटको घोषणा गरेका छन्। यस्तै, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्...
प्रदेशलाई ५७ अर्ब, स्थानीय तहलाई ९७ अर्ब : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा सरकारले प्रदेशहरूका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान वितरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । यस्तै, स्थानीय तहहरूलाई ९७ अर्ब ५६ करोड अनुदान दिइने उनले बताए । केन्द्र र प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्य...
सार्वजनिक संस्थानमा २८ हजार जनालाई रोजगारी
काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा १३ हजार ४०४ र सबैभन्दा कम व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानमा एक हजार २७९ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारी...
गणतन्त्रपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका पाँच बजेट, कुन कस्ता ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले भोलि (शनिबार) चार बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि अध्यादेशमार्फत आएको यो बजेट छैटौँ हो। तर संविधान बनेपछि अध्यादेशमार्फत् आउने यो बजेट पहिलो हो। नेपालको संविधान २०७२ ले अध्यादेशमार्फत् ...
काठमाडौँ । सोलुखुम्बु जिल्लाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका–९ खोलाखर्कका तेन्जी शेर्पा १८ औँ पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । सुमी ट्रेक मार्फत सगरमाथा आरोहणमा गएका क्लाइम्बिङ गाइड शेर्पा सात आरोहीको नेतृत्व गर्दै शिखरमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । सोही कम्पनीमार्फत स...